स्वास्थ्य सन्देश Archives - Page5of 19 - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
२०७८ कार्तिक २६ गते १०:२०
काठमाडौँ । यदि तपाईंको कपाल पनि धेरै झर्छ भने बजारमा कुनै पनि महँगो सामान किन्नु पर्दैन। हामी घरको उपचार गरेर आफ्नो कपाललाई सुन्दर बनाउन सक्छौं र यो धेरै कालो र चमकदार हुनेछ। मेथी साँच्चिकै अद्धभुत मसला हो जसले हाम्रो खानालाई स्वादिष्ट बनाउँदछ, र यो...
यस्ता छन् प्याज खानुका फाइदा, यी रोगहरु हुन्छन् चैट
२०७८ कार्तिक २३ गते ९:५०
काठमाडौं । भोजनमा वा सलादका रूपमा खाइने प्याज स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । केही मानिस स्यान्डविच, चटनी तथा चाटका रूपमा पनि प्याज सेवन गर्छन् । तर प्याज त काँचै खाँदा पनि स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ । सल्फर, अमिनो एसिड, एन्टीबायोटिक्स, फाइबर, क्यालिस्यम, आयोडिन, फस्फोरस, मिनरल्स...
शरीरमा सेतो धर्सा आउने कारण र हटाउने उपाय
२०७८ कार्तिक २३ गते ९:४७
काठमाडौं । सामान्यतया महिलाहरुको शरीरको विभिन्न भागमा सेता धर्साहरु देखिन्छ । यो विशेषगरी पेट, हिप, पिँडौला, स्तन आदि आसपासमा हुने गर्दछ । जसका खुल्ला कपडा लगाउँदा महिलाको शरीरमा भएको सेतो धर्साहरु सबैको नजरमा पर्न पुग्छ । जसका कारण युवतीहरु चिन्तित हुने गर्दछन् । विशेषगरी...
२०७८ कार्तिक २३ गते ९:३३
काठमाडौं । आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै विभिन्न ग्याजेटको प्रयोग पनि बढ्दो छ । जसमध्ये एयरफोन पनि एक हो । प्रायः युवा तथा किशोर उमेरका व्यक्तिको अधिकांश समय कानमा एयरफोन हुने गर्दछ । यो एक प्रकारले फेसन झै बनेको छ । तर यही फेसन समस्या बन्न...
फाइजरको गोली कोरोनाविरुद्ध ८९ प्रतिशत प्रभावकारी
२०७८ कार्तिक २० गते ११:५६
काठमाडौं । औषधि निर्माता अमेरिकी कम्पनी फाइजरले आफ्नो नयाँ उत्पादन एन्टी कोभिड गोली ८९ प्रतिशत बिमारीलाई अस्पताल भर्ना हुन र मृत्यु रोक्न सक्षम भएको दाबी गरेको छ । फाइजर इंकले हिजो (शुक्रबार) भनेको छ- कोभिड-१९ को यो प्रायोगिक एन्टिभाइरल गोली (चक्की) ले बिरामीलाई अस्पताल...
२०७८ कार्तिक ६ गते १३:४०
डा. सूर्य पराजुली स्तन क्यान्सर के हो ? – स्तनमा रहेका कोषहरुबाट विकसित हुने यो क्यान्सर पुरुष, महिला दुवैमा हुनसक्छ र शरीरका अरु भागमा पनि फैलन सक्छ । स्तन क्यान्सरको अवस्था के छ ? – यो क्यान्सर जुनसुकै भूगोल र जातजातिका महिलामा हुनसक्छ ।...
२०७८ कार्तिक ६ गते १:१६
एजेन्सी । धेरैले बिहान उठ्ने वित्तिकै चिया पिउने गर्छन् । चिया पिउन सौखिनहरु दिनमा ४ देखि ५ कम चिया पिउने गर्छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा हुने चियाको चर्चाले चिया पिउनु “स्टेटस सिम्बल” को रुपमा लिन थालिएको छ । यसकारण पनि मानिसहरुमा चियाको लत...
२०७८ कार्तिक ६ गते १:१५
सबैको घरमा हुने सामान्य प्रक्रिया हो एक समय पकाएको खाना फेरि तताएर खानु । यो सामान्य लागेपनि कतिपय खानेकुरा फेरि तताएर खानु निकै हानिकारक हुन्छ । कतिपय यस्ता खानेकुरा पनि छन्, जुन पुनःतताएर खाँदा क्यान्सर जस्तो भयानक रोगको समेत खतरा हुन्छ । आज हामी...
२०७८ कार्तिक २ गते १०:२५
काठमाडौँ । शरीरमा एवम् रगतमा उपस्थित विजातीय तथा अनावश्यक तत्वलाई पिशाबबाट बाहिर निकाल्ने काम मिर्गौला अर्थात् किड्नीले गर्दछ। किड्नीको विशेष सम्बन्ध मुटु, फोक्सो, कलेजोसँग हुन्छ। मुख्यगरी मुटु र किड्नीले परस्पर सहयोगको साथ काम गर्ने गर्दछ। त्यसकारण, यदि कसैलाई मुटु रोग लागेको छ भने उसको...
पाइल्स भएर तनाबमा हुनुहुन्छ ? खानुहोस करेला यस्ता छन फाइदै फाइदा
२०७८ कार्तिक १ गते १:३७
काठमाडौं । तीते करेला स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिनछ । यसको सेवन प्राय मानिसहरुको घर घरमा हुने गर्दछ । यो एउटा लहरे तरकारी पनि हो यो धेरै जसो गाँउ घरमा पाइने गर्दछ । यसको सेवन गर्दा हाम्रो शररिलाई...